Midowga Musharaxiinta Oo Muddeeyay Goorta Ay Bannaanbaxa Qabanayaan – Great Banaadir
Muqdisho – Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa iclaamiyay in 6-da bishan ay isu soo bax ka dhigi doonaan Magaalada Muqdisho, kadib markii ay arrintaasi is afgarad ka gaareen Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, Maxamed Xuseen Rooble.
Musharax Madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid ah Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa sheegay in 6-da bishan oo Sabtida soo socodo ku aaddan ay bannaabaxooda ka dhigi doonaan Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
“Si aan ugu dhawaano Geedi-socodka aan ugu soo jirnay Qabashada Doorasho loo dhan yahay, la isku raacsan yahay oo si Xasilloon u dhacdo cid kasta oo katirsan Saamileyda kale ee Siyaasadeed, Dowlad Goboleedyo, Bulshada Rayidka & qaybaha kale ee taageerada siiyay in uu dhaco isu soo baxaas oo dhacaya 6-da Maarso 2021.”
Midowga Musharaxiinta ayaa ka gows-adeegay in ay ka tanaasulaan Bannaanbaxa ay sheegeen in aragtidooda siyaasadeed ay ku muujin doonaan, taasoo Xukuumadda dirqi kaga dhigtay inay bedesho mowqifkeedii hore, ee ahaa inaanan dalka laga qaban karin Bannaanbaxyo, sababo ku aadan Faafitaanka Xanuunka COVID-19 iyo Xaaladda Amniga oo aan wanaagsanayn.
Maxamed Xuseen Rooble, Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya ayaa xalay magacaabay Guddi isku dhaf ah, oo ka shaqayn doono Qaban-qaabada Bannaanbax Nabadeed oo ka dhaca magaalada.